Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuMasingane 2018 » SciBraai
Isilwane esithusayo sasiphila eNingizimu Afrika emandulo
Awucabange nje amazinyo afana nemimese, egcwele umlomo wesilwane esingangebhasi, simi phambi kwakho – isilwane esifana nenyoni enemilenze emide nomsila ofana nowengwenya. Ukuba wawuphila ngezikhathi sasemandulo esidlula iminyaka engama-200 izinkulungwane zezinkulungwane (200 000 000), ubungahlangana naso lesi silwane esithusayo.
Ososayensi abacwaninga amathambo ezilwane zasemandulo sebethole izinyathelo ezashiwa ilezi zilwane ezibizwa nge-Kayentapus ambrokholohali ematsheni atholakala ezweni lase Lesotho, phakathi kweNingizimu Afrika. Lezi zinyathelo zijabulisa ososayensi ngoba ububanzi kwezinyathelo kubatshela ukuthi ama- K ambrokholohali ayemakhulu ukudlula zonke ezinye izilwane ezazitholakala kulesi sikhathi emandulo.
‘Secrecy about intersex infanticide could, however, be a stumbling block in substantive research. That, and a scarcity of resources’ (Jon McCann)
Izingane ezizalwa nezitho zangasese ezingacacile ziyabulwawa
Abalaphi bendabuko abaningi bayavuma ukuthi bayalubulala usana oluzalwa nezitho zangasese ezingabonakali kahle ukuthi ezesifazane noma ezesilisa. Lokhu kuvezwe kwiphephandaba i-Mail & Guardian kubhalwa ngocwaningo lapho bekukhulunywa nabelaphi bendabuko abangama-90.
Kulaba belaphi okubalwa kubo izinyanga ezindaweni eziningi eNingizimu Afrika abangama-88 bayavuma ukuthi sebeke bakwenza lokhu kokubalala lezi zingane ngoba bethi lezi zingane ziyibhadi emphakathini. Echaza oyedwa, utshele abacwaningi ukuthi wake waphula intamo yosana olwazalwa nezitho zangasese ezingabonakali kahle.
Isayensi ithi lezi zingane zibalwa kweyodwa kweziyi-1000 eNingizimu Afrika. Eziningi zizalwa kanjena ngenxa yokuxubana noma ukuphambana kwemfuzo ehambisana nobulili.
Tritium occurs naturally in the stratosphere and is rained out on the earth’s surface. Once it enters the groundwater system and becomes isolated from the atmosphere, it decays at a constant rate.
Imvula nokuphatheka kwamanzi okuphuza
Eminyakeni emibala esidlulile, izwe laseNingizimu Afrika selibhekene nenkunzimalanga yesomiso esesiqhothule imfuyo namasimu ezweni lonke. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi izimvula seziqale ukuthi zibuye kwezinye izindawo ezweni kodwa iKapa kubonakala sengathi ayiyitholanga lenhlanhla yemvula njengoba sisaqhubeka khona isomiso, njengoba sekuzofika isikhathi sokuphela kwamanzi esifundazweni sase Ntshonalanga Kapa.
Ososayensi beNyuvesi yaseStellenbosch sebeqhamuke nocwaningo oluzotshengisa ukuthi kukephi ezweni lapho khona izimvula zithela amanzi angena ngaphansi komhlaba ngendlela yokuthi angasebenziseka isikhathi eside. Yize kwaziwa kahle ukuthi izimvula zina kanjani ezweni, ososayensi abakakazi kahle ukuthi lezi zimvula zenza kanjani ukuthi kube khona amanzi anele kahle ngaphansi komhlaba.